Free music maka iPad / iPod / iPod ịkpọgharịa
The n'okpuru kwuru banyere ha bụ atọ n'elu ọtụtụ music ngwaọrụ na e mepụtara site na Apple Inc. iji jide n'aka na music ke laa bụ mgbe otu ihe iseokwu maka a onye ọrụ. E nwere ọtụtụ iri puku uru nke eji ihe ndị a na ngwaọrụ na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na ndị a na ngwaọrụ ndị ukwuu na ina. N'okpuru ebe kwuru banyere ha bụ ndị kwesịrị ekwesị formats na-akwado site na ndị a music ngwaọrụ na na metụtara songs nwere ike na-egwuri site ọrụ n'oge ọ bụla ha chọrọ ime ka n'aka na nke mgbe na-ebilite mgbe a song ebudatara ọ bụla usoro.
1. iDevices na-akwado music formats
2. Olee otú ibudata music free maka iPad, mbadamba, iPod, iPod ịkpọgharịa na TunesGo
3. Otú nyefee music ka iDevice
4. Otú nyefee music ka iTunes
iDevices na-akwado music formats
iPad akwado formats
Ndị na-esonụ bụ music formats na-akwado site na iPad na ọ bụ-ahụ kwuru na ọmụma e amịpụtara si URL http://www.theipadguide.com/faq/what-audio-formats-will-ipad-playsupport
AAC (16 na 320 kbps)
Echebe AAC (MP4 si iTunes Store)
MP3 (16 na 320 kbps)
Audible (formats 2, 3, na nke 4)
iPod akwado formats
Ndị na-esonụ formats na-akwado iPod na nkọwa e amịpụtara si URL http://www.everymac.com/systems/apple/ipod/specs/ipod_2ndgen.html
MP3 (ruo 320 kbps)
Audible (n'ihi na Mac naanị)
iPod ịkpọgharịa akwado formats
Ndị na-esonụ na-na formats akwado site na iPod ịkpọgharịa na mmịpụta e mere si https://www.apple.com/ipod-shuffle/specs.html
AAC (8 na 320 kbps)
Echebe AAC (site na iTunes Store)
MP3 (8 na 320 kbps)
Audible (formats 2, 3, 4, Audible enwekwukwa Audio, AAX, na AAX +)
Olee otú ibudata music free maka iPad, mbadamba, iPod, iPod ịkpọgharịa na TunesGo
Wondershare Mara maka-emepe emepe na mmemme na-ọ bụghị nanị na ọkaibe ma bụ nakwa otu onye nke kasị mma na-eme ka n'aka na music transfer si dị iche iche nyiwe ka iTunes na iPod, iPod ịkpọgharịa na iPad bụghị ihe nke mgbe nile. Kenkwukorita software interface na-ahụ na ndị kasị mma na-nyere ka ọrụ nke mere na ha nwere ike iji ihe omume na ala na afọ ojuju. The ọrụ nwekwara ike ime ka n'aka na music nyefe si iDevice n'elu ikpo okwu abụghị otu ihe iseokwu na niile. The iTunes na nke a ọnọde nsogbu na onye ọrụ kwesịrị iji merie ikikere mbipụta na ndị nke ukwuu na ndị ụlọ ọrụ na ha na-agaghị mfe wepụrụ otú TunesGo jide n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka ọrụ na nke a na ha na-ihe kasị mma ndibiat maka onetime ugwo maka nke upgrades na-nyere rue usoro ihe omume na-agba ọsọ n'elu usoro. The TunesGo nwere ike na-ahuta ka music management usoro na-enye ohere ọrụ iji jide n'aka na mmezi bụ mgbe otu ihe iseokwu dị ka Wondershare ewe usoro a na jupụtara hassle. A nkuzi ga-ahụ na onye ọrụ na-akawanye nzọụkwụ site nzọụkwụ zuru ezu iji jide n'aka na arụmọrụ nzọụkwụ na-ghọtara. Esonụ bụ ụfọdụ n'ime nzọụkwụ ndị a ga-soro na nke a:
1. The URL http://www.wondershare.com/tunesgo/ bụ na-ịchọgharịrị iji jide n'aka na isi website nke Wondershare na meghere:
2. The ọrụ ugbu a kwesịrị pịa Gbalịa ya free bọtịnụ jide n'aka na mmapụta elu-egosi:
3. The ịzọpụta faịlụ button bụ na-pịrị mere na software arụnyere. The nke pụrụ ịkpata kpaliri nwekwara a ga-agbaso na nke a. Ozugbo echichi completes onye ọrụ mgbe ahụ mkpa ijide n'aka na na software tapped meghere na isi interface nke usoro ihe omume na-egosi:
4. Ka ibudata na music na ụdị nke MP 3 onye ọrụ kwesịrị ileta homepage> YouTube ka iTunes
5. The iDevice a na-ahụ na-jikọọ kọmputa iji jide n'aka na ihe omume na-achọpụta rụọ ya na Ama nke e ịchekwa n'ime:
6. The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na nyefe music> Bubata si iTunes na-ahọrọ:
Otú nyefee music ka iDevice
Usoro nke na-ebufe music si usoro iDevice ọ na-gwara iji jide n'aka na usoro na e kwuru n'okpuru na-soro mere na ọ bụghị nanị na-aghọ mfe kamakwa onye ọrụ na-akawanye na ya pụta na akara na chọrọ:
1. Onye ọrụ kwesịrị ileta website nke Wondershare ibudata software ie www.wondershare.com/tunesgo na pịa agbalị ya free iji jide n'aka na usoro a initialized:
2. Ozugbo usoro ihe omume e arụnyere onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ọ na-ulo oru nke mere na isi ihuenyo egosi:
3. The ngwaọrụ bụ mgbe ahụ ka ike jikọọ kọmputa:
4. The TunesGo ibubata bụ na-pịrị iji jide n'aka na kpaliri na-soro na music na-agafere ka PC ma ọ bụ ndị ọzọ na ọnọdụ na usoro risịrị:
5. Dị ka ngwaọrụ abụọ jikọọ na kọmputa otú ahụ toggling ọrụ bụ na-eji nyefee ọdịnaya gaa na android ngwaọrụ:
Otú nyefee music ka iTunes
Ndị na-esonụ bụ usoro nwere ga-agbaso iji jide n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka onye ọrụ na nke a na ya pụta na-enweta dị ka chọrọ:
1. The iDevice bụ ike jikọọ kọmputa:
2. Ihe omume ga ịchọpụta iDevice-akpaghị aka na ga-ele anya dị ka hụrụ na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
3. Onye ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ijide n'aka na Mbupụ na iTunes họrọ n'ihu n'ihu:
4. Ozugbo usoro okokụre ọ ọrụ mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na lekwasịrị ngwaọrụ na jikọọ na PC na music na-agafere mezue usoro. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na otu usoro-emetụta ndị android ngwaọrụ dị ka mma. Ndị a na ngwaọrụ nwekwara ike ike jikọọ jide n'aka na needful na-eme na ụzọ kasị mma.
The ọkachamara ndụmọdụ dị ezigbo mkpa ma ọ bụrụ na onye ọrụ bụ enweghị ike na-eso usoro. The forums na Wondershare nwekwara ebe a iji jide n'aka na onye ọrụ nke na-kpebiri na nke a. The elu ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-emekwa ka n'aka na nke na-anọgide dịghị egwuregwu mgbe niile. Iji jide n'aka na data na-adịghị egbughị ọ na-gwara iji jide n'aka na ọkachamara ndụmọdụ na-enweta ya.
Top 7 égwu dezie Photos on iPad
iPad Video Player: Watch Videos on iPad enweghị converting
> Resource> iPad> Free Music maka iPad / iPod / iPod ịkpọgharịa